Ndi Nkwekọrịta Ọhụụ Na-emewanye SEO?
Ndị na-emepụta ọdịnaya na ndị na-ere ahịa n'Ịntanet na-eche nche mgbe nile maka ụzọ ndị ọzọ iji chụpụ ha SEO dị na peeji nke mbụ nke engines ọchụchọ. Ihe na-adọrọ mmasị bụ na ọbụna mgbe ha ruru Google n'elu 10, ọ ka dị ha mkpa ịmepụta ọdịnaya ọhụrụ na ihe bara uru na mgbe nile iji nọgide na-enwe ọnọdụ ha.
Otú ọ dị, ọ dị oké mkpa ka ndị nwe ụlọ ebe nrụọrụ weebụ ghọta na ịmepụta ọdịnaya dị oke ezu ezughị. Ezi ọdịnaya chọrọ nkwalite proactive. Ọ dị mkpa ịkwalite ọdịnaya gị na ndị ọzọ iji mee ka mmadụ nwee ike iru.
Ka anyị chee ihu na ya: mgbe anyị na-ede ma na-ebipụta isiokwu anyị, blog posts, eBooks, akwụkwọ ọcha ma ọ bụ infographics, ụzọ kachasị mma iji nweta ha n'ihu ndị na-ege anyị ntị site na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ka okwu ahụ na-aga, òkè na-elekọta. O siri ike ịgọnahụ na ihe gbasara mmekọrịta ọha na eze, yana mgbasa ozi ọha na eze, na-emetụta SEO. Ndị ọkachamara na-ekpo ọkụ na-ekwenye n'ụzọ zuru ezu na nkwupụta nke onye na-azụ ahịa ahịa na-aga ahịa bụ Jay Baer, ​​bụ onye kwuru na ọdịnaya dị ọkụ, na mgbasa ozi ọha na eze bụ peturuolu.
Olee Otú M Ga - esi Nyere Aka Ngosipụta Ọdịmma Na - eme Ka NDỤ M NA -
1. Mee ka nhazi nke nkwekọrịta nyochaa
Ihe mbụ i kwesịrị ime iji chụpụ okporo ụzọ gị na saịtị gị bụ ime ka ọ dị mfe maka ndị ọrụ ịkekọrịta ọdịnaya gị site na mgbasa ozi mmadụ. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ahapụla ndị ọbịa ahụ ka ha detuo ma kpochapụ URL gị n'ime ebe ha Facebook. Ọtụtụ ndị na-agụ enweghị oge ma ọ bụ ndidi iji mee nke ahụ. N'ihi ya, ị ga-ahapụ ohere iji kwalite ọdịnaya gị n'ihi ahụmahụ ọjọọ ndị ọrụ.
Buru n'uche, mgbe ị na-eche banyere ndị ọbịa gị ma mee ka ọ dịrị ha mfe ịkọkọrịta ọdịnaya gị, ha ga-enwe ike ịkọrọ gị posts gị na obodo ha, na-ewetakwu okporo ụzọ na-ezigara gị na saịtị gị.
2. Gbanwee Backlinks gị
Backlinks bụ njikọ sitere na ihe ndị ọzọ gaa na ibe weebụ gị.Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ engines ọchụchọ, gụnyere Google, Yahoo, na Bing na-atụle ma ọnụ ọgụgụ na ogo nke ndị azụlink ndị a mgbe ha na-edepụta ibe. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, otu peeji nke na-agụnye ọtụtụ backlinks dị elu na-eme ka ogo ogo ọchụchọ dị elu. Kedu ihe ọzọ, ọ bụrụ na ndị na-agụ na-abanye na saịtị gị site na ebe nrụọrụ weebụ a tụkwasịrị obi, engines ọchụchọ ga-eso njikọ ahụ, depụta ọdịnaya, ma kwado ọdịnaya gị.
3. Na - emepe Ebe Ị Ga - Epeepe maka Nkọwapụta Ngwaahịa
Na 2017, ngwakọta nke mkpokọta mobile, nke mmekọrịta mmadụ na ibe, na ahịa mpaghara na - emetụta SEO ka ọ dịtụbeghị. Ụbọchị ndị a, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-achọ na ekwe ntị karịa laptọọpụ. Ha na-ahọrọ ịchọta na ịzụta na njem ahụ. Ngwongwo ọchụchọ na-eji ihe eji eme ka a na-eji ngwa-ngwa kachasị mma na ogo elu. Jide n'aka na nsụgharị mobile nke ebe nrụọrụ weebụ gị na-enye ndị ọbịa ụzọ dị mfe isi kesaa ọdịnaya gị.
Ndị nwe ụlọ ebe nwere ọtụtụ ebe na ebe ọdịda mpaghara maka ọdịnaya ha, ọ dị mkpa ichebara otu esi ebuli ụzọ ntanetị na mmekọrịta mmadụ na saịtị ha. Ọ dị mkpa n'ihi na ihe ndị ahụ dị n'elu bụ akụkụ ndị dị mkpa nke na-emetụta ụbụrụ ọchụchọ mpaghara.
Nke ikpeazụ ma ọ bụghị ihe kachasị mkpa ị ga-atụle bụ ihe gbasara mmadụ na-agbakwụnye ikike gị n'isiokwu gị, posts blog, na vidio YouTube site n'igosi na ha bara uru ma bụrụ ndị a tụkwasịrị obi. Okwu a na-ahụ maka akaebe mmadụ na-ezo aka na ọdịnaya gị dịka nyocha, okwu, na nkwupụta site na ndị ọkachamara n'ihe banyere okwu. Ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na-arụ ọrụ dị ka ndị a: ọ bụrụ na mmadụ achọpụta na ọtụtụ narị mmadụ na-ekerịta ọdịnaya gị, ha ga-enwe ọchịchọ maka ịlele ya na ịkekọrịta ya Source .